PTC CREO Parametric Course - Kere, nyocha na ịme anwansị (2/3) - Geofumadas
Creo Parametric bụ imepụta, imepụta na injinia nke PTC Corporation. Ọ bụ sọftụwia na-enye ohere ịme ngosi uwe, photorealism, mmebe eserese, mgbanwe data, n'etiti ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ ihe ama ama n'etiti ndị na-emepụta igwe na ndị ọkachamara ndị ọzọ.
AulaGEO na-enye usoro ihe nlere 3D a dị elu nke na-eji iwu Creo Parametric dị elu. N'ime ya, a kọwara iwu ndị a n'uju ma rụọ ọrụ bara uru iji wusie ike mmụta. A na-etinye faịlụ nke mmemme ahụ yana ihe osise sụgharịrị nsonaazụ ikpeazụ nke ọrụ ahụ.
3D ịme ngosi na usoro ịme anwansị
3D Ndị na-eme egwuregwu
Ndị na -emepụta akụkụ akụkụ
Previous Post«Previous Agụmakwụkwọ Edegharị vidiyo na Adobe Premier
Next Post BIM Course - Usoro iji hazie iwuNext »